Dabeelaha Qaboob | Bloomington Public Schools - District #271
Home / About Us / Emergencies & Closings / Wind Chill / Dabeelaha Qaboob
Chart-kan ama kharidadan hoos ku qoran waxay kaa caawinaysa sidad go’aan wanaagsan oga gaari lahayd markay timada ammanka cunugada xaga qaboobka. Sanduuqa/box-ka hoos ku qoran markad fiirisid waxad arkaysa meelo la modooweyey, modowgas wuxuu u dhigma Qatar. Ayadoo saas ah ayey hadana ku xirantahay meesha aad joogto, sida meelaha lagu ciyaro oo daboolan meel ay hawo ka soo galaysana aysan jirin.
Current Bloomington conditions waxaa diyar kuugu ah Adeega Qaranka ee Cimalad/National Weather Service.
Maxay Tahay Cabirka Hawada Qaboob?
Cabirka wuxuu yahay waxa aad dareemayso markad bananka tagan tahay, markuu kuleelka hawada hoos u dhacdo oo aad taagantahay bananka aad na daraymaysid qaboob aad moodid inuu jirka ku dildilacaya oo kale weeyan. Hawada qaboob markay sii badatabo jirka temperature-kiisa ayaa hoos u siidhacda. Hawada qaboob saamayn kuma lahaato tangiga gaariga iyo tubooyinka biyaha qaado.
Maxay Tahay Qaboobka aad Barafka Noqonaysid/Frostbite?
Qaboobga aad Barafka noqonaysid/Frostbite waxay tahay markuu jirkada ama markas meeshii kaa banan ay baraf noqdo oo xitaa dhiiga socon waayo. Meelaha jirka ugu daciifsan waa faraha, faraha lugaha, dhagaha ama sanka, hadii ay baraf ku noqdeen waxad ku garanaysa ayadoo meeshas dareenka ka tagay iyo waliba iyadoo u ekaata inuu nuxurka katagay. Haday saas noqdan si dag dag ah ayad waxaad ugu baahantahay inaad dhaqtar ku aado.
Maxay Tahay qaboobga Dilaga ah/Hypothermia?
Qaboobga Dilaga ah wuxuu yahay midka cabirka jirka ay ka hoos marto 95. Sidad ku garan kartid in qaboobka noocas ah uu jirkada ku dhacay ayaa noqonkarta adigoo gariir aadan joojinaynin suubinaya, xasuusta oo kaa tagta, awooda oo kaa tagta, hadlka oo aad gaf gafaysid iyo wareer. Hadaad isku aragto waxaas oo idil waxaad u baahantahay dhaqtar dag dag ah. Dhaqtar hadadan heli Karin markas iskuday inad jirkada si tartiib ah u kululeeso.
Sideetahay Inad u Labisato Cimiladan Qaboobka ah?
Waxaad xirata dhowr dhar ah oo jirkada qandac ka dhigayo. Dharkas oo idil hawada dhax maraysa way ku caawinaysa. Jakadada hanoqoto inad isku dhajiso.
Xiro koofi maxaa yeelay boqolkiiba 40 kuleelka jirkada wuxuu ka yimada madaxada.
Afkaada daboolo si sanbabkada qaboob u galin.
Gacmaha kuwa lagaliyo waxaa gloves-ka ka fiican mittens-ka.
Isku day inad dhinaca hawada ay ka imanayso ka fogato, dharkadana qaleel ahado.